Bacriminta | January 2020
Ugu Weyn Ee Bacriminta
Compost waa bacriminta dabiiciga ah ee laga helay natiijada kala-soocidda walxaha dabiiciga ah ee hoos yimaada saameynta jeermiska. Waxay hagaajinaysaa carrada kasta: dhoobo waxay ka dhigtaa mid aad u jajaban, bac ah - awood u leh inay ku ururaan qoyaan. Waxaa lagama maarmaan ah in la helo meel ku taal goob ay ku beeri waayaan ama aan waxba ku beeranin, halkaasoo uu jiro carrada madow.
Noocyada samaynta compost adiga ayaa sameeya
Beeralayda iyo beeraleydu waxay had iyo jeer raadinayaan siyaabo lagu kordhiyo beergooyska, sababtoo ah isticmaalka bacrimiyayaasha organic waa mid aad u qaali ah oo adagtahay in la helo. Bacriminta macdanta ayaa u muuqda inay jaban yihiin, waxay bixiyaan wax-soosaarkooda sare, laakiin ka dib markii mudo yar ka dib mulkiilayaashu waxay ogaanayaan in ciidda ay sii xumaanayso: waxay noqoneysaa iftiin, adag, bacaad ah oo aan isku wada duubnayn.
Waxaan ku beeri karnaa oo aan u deyn karnaa xabbad si sax ah
Cacti ayaa noqotey mid caan ah oo caan ku ah koritaanka guriga. Geeddi waa wax aan qabyo ahayn ee daryeelka iyo u adkaysata abaarta, xitaa haddii aad ilowdo in aad biyo kudheesho, cagusku ma dareemayo raaxo la'aan. Sida loo doorto cakto Waxaa jira dhowr ka mid ah kuwa beeraha geedka ugu haboon iyo kuwa ugu jecel guryaha xaaladaha qolka.
Faa'iidooyinka isticmaalka kiciyaha bisil ee miro-dhaliyaha "Ovary"
Su'aasha ah sida loo kordhiyo dhalidda dhirta beerta ayaa weli ku habboon adduunka casriga ah. Waxaa si gaar ah muhiim ugu ah dadka degan xagaaga oo aan ku faani karin bacriminta carrada iyo tiro ku filan oo ah pollinators cayayaanka. Sidaa darteed, in this article waxaan ka hadli doonaa daroogada in uu kicin karo abuurka ugxan iyo kordhinta wax-soosaarkooda, kuwaas oo ah, Jooniska Universal iyo tilmaamaha isticmaalka.
Sidee baytarafka loo isticmaalo beeraha
Qof kasta oo dhirta koraya wuxuu ogyahay in dhar la'aan, ma jiri doonaan dalag, dalagyo aan la cuni karin, ama dalagyo dalagyo ah. Dhirta aan haysan nafaqooyin ku filan carrada, marka lagu daro, dhammaan carradu waa nafaqo, sidaa daraadeed caawimo dalagyada bacriminta ah ayaa loo baahan yahay in lagu caawiyo. In this article waxaan ka hadli doonaa superphosphate, codsiga iyo hantida.
Isticmaalka nalalka potassium beerta iyo beerta
Geedaha, gaar ahaan kuwa ku nool carrada saboolka ah, waxay u baahan yihiin nafaqo si ay u koraan una horumaraan sida caadiga ah. Bacriminta Potash waxay ka caawiyaan dalagyada si fudud u dulqaadan maalmo qalalan iyo barafsan, potassium ayaa looga baahan yahay dhirta ubax markaad gooyo. Mid ka mid ah Bacriminta macdanta macdanta waa nitrate.
Nitroammofosk: sifooyinka, halabuurka, codsiga
Marka koraan dalagyo iyo geedo midho leh, bacarinimadu waa mid aan loo baahnayn. Cuntada badan ee dalaggu waxay ku xiran tahay dhowr arrimood, laakiin qiimaha nafaqada ee carrada waa mid ka fog meesha ugu dambaysa. Одним из популярных и эффективных удобрений является нитроаммофоска - высокоэффективное комплексное удобрение, содержащее в себе сразу три полезных компонента: азот, фосфор и калий.
Beeralayda Ruushku waxay billaabeen inay bacrimiyaan dalagga xilliga qaboobaha
Dalagyada beeraha ee xilliga qaboobaha waxay soo saaraan wax-soo-saarka xasilloon ee goobaha muhiimka ah ee beerashada waxayna si aad ah ugu jawaabaan isticmaalka Bacriminta, sidaas darteed beeralayda gobollada dhexe ee koonfurta iyo waqooyiga Caucasus ee Ruushka ayaa bilaabay shaqo beereed xilliga gu'ga xilliga gu'ga ee dalagyada xilliga qaboobaha, sidaana waxa lagu sheegay Wasaaradda Beeraha Ruushka.
Naas-nuujiyaha beerta iyo beerta oo idil waxay ogtahay nooca humus carrada, sida ay muhiim u tahay wax-soosaarka sare iyo dhirta caleenta beerta. Qaar badan oo xitaa ku hawlan wax soo saarka madax banaan. Si kastaba ha ahaatee, bilowga bannaanka iyo bannaanka u yihiin ma had iyo jeer la fahmo waxa la sheegay, sababta qaybta ah ee ciidda loo baahan yahay, waxa ay saameeyaan iyo meesha laga helo.
Tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka biohumus dareeraha
Goosashada wanaagsan iyo horumarka caafimaad ee beerta iyo beerta dalaggu waa wax aan macquul aheyn iyada oo aan la siin quudin joogto ah. Waxaa intaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo nidaamkan ka hor intaan la beeri (marxaladda qallajinta abuurka) kadibna si joogto ah u sii wadi. Sida aad ogtahay, Bacriminta waa macdanta iyo dabiiciga ah, labadaba noocyadaas ayaa si siman loogu baahan yahay dhirta.
Teknoolajiyada codsiga bacriminta dabiiciga ah "Signor Tomato"
Bacriminta dabiiciga ah "Signor Tomato" shirkadda BIO VITA waxay u taagan tahay quudinta ugu fiican ee yaanyada iyo basbaaska. Tixgeli halbeegga, faa'iidooyinka isticmaalka iyo farsameynta ficilkan daroogada ah. Cuntada, walaxda firfircoon iyo foomka sii-daynta "Saxiix Tomato" - Bacriminta dabiiciga ah, oo ay ku jiraan tiro badan oo kiimiko ah: Nitrogen, potassium iyo fosfooraska ku jira saamiga 1: 4: 2
Noocyada iyo faa'iidooyinka dhirta bacriminta "Kemira" ("Fertika")
Kemira waa nafaqada macdanta oo ay ku jirto maaddooyin yaryar oo macruufiyaal ah noocyada dhirta qaarkood. Kala duwanaanshaha codsigu waa mid ballaaran: waxaa loo isticmaalaa beeraha, beeraha iyo shaqada beeraha. Warbixinta Guud Qalabaynta "Kemira" ("Fertika") waxaa lagu soo bandhigay qaabka macdanta adag ee adag.
Isticmaalka nitrophoska bacrimin ah dalagyada kala duwan
Nitrophoska - bacriminta nitrogen-fosfooraska-potassium adag, taas oo loo isticmaalo si loo kordhiyo dhalidda ee beerta iyo beerta beerta oo dhan. Maantana waxaan ka wada hadli doonnaa caan ka mid ah nitrophosphate iyo sifooyinka, iyo sidoo kale qor qiyaasta codsiga dhirta kala duwan. Waxyaabaha kiimikada ah iyo foomka sii deynaya Iyadoo lagu saleynayo kor ku xusan, waxay noqonaysaa cad in bacriminta nitrophosphate ay ka kooban tahay saddex qaybood oo waaweyn ee qiyaasta soo socda: nitrogen - 11%; Fosfooraska - 10%; potassium - 11%.
Isticmaalka bacriminta chloride chloride beerta
Wixii horumarinta caadiga ah ee warshad kasta, saddex nafaqo waa lagama maarmaan: nitrogen, fosfooraska iyo potassium. Nitrogirku wuxuu ku kordhiyaa koritaankooda iyo midhaha, fosfoorku wuxuu xoojiyaa koritaanka, iyo potassium waxay ka caawisaa dalagyada beerta si ay uga gudubto walbahaarka qaab shuruud ah, si ay ula qabsadaan cudurrada, si loo keeno dalagyo tayo sare leh iyo kuwo dheer.
Bacriminta "Kalimagneziya": Tilmaanta, halabuurka, codsiga
Isticmaalka caadiga ah ee "Kalimagnezii" ee beerta ama beerta waxay kordhisaa kororka bacriminta iyo kordhinta sifooyinka tayada dalagga. Raadinta dhabta ah ee walaxdaas waxaa loogu talagalay dhirta chlorophobic iyo saboolka, carradu ka soo go'day. Waa maxay bacriminta "Kalimagneziya", wixii talooyin ah ee ay soo saarayaashu ku siiyaan tilmaamaha, marka ay lagama maarmaan tahay iyo waxa qiyaasta loo isticmaalo - waxaad ka heli doontaa jawaabaha su'aalahan ku jira maqaalkeena.
Isticmaalka Nitrate kalsate sida bacriminta
Nitrate kalsiyam ayaa inta badan loo isticmaalaa beeraha sida dharka ugu sarreeya dhirta ubaxa, khudradda iyo miraha miraha. In this article waxaan ka hadli doonaa sifooyinka wanaagsan ee nalalka kalsiyum, iyo sidoo kale tixgeliyaan barashada kooban oo ku saabsan isticmaalka. Nitrate kalsiyam: ka kooban ee bacriminta Halabuurka bacriminta waa calcium toos ah, kaas oo ku dhawaad ​​19% tirada wadarta guud.
Sidee loo dalbadaa bacrimin "Goom 7"?
Beeraley kasta oo doonaya in uu helo dalag wanaagsan oo sariirahooda ka mid ah, waxna ma laha, tani waa qorshe yar oo dacha ah, oo leh baradho iyo qajaar lagu beeray, ama beer beer weyn. Tan iyo markii ciidda la jaro waqti ka dib, waa suurtagal in la koro dhirta caafimaadka leh iyada oo aan dhar xidhin. Waxaa loogu talagalay ujeedada bacriminta dabiiciga ah "Gumat + 7 Iodine".
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bacriminta 2020